Levitika 14 - Ny Baiboly
Levitika toko 14
Fanadiovana ny boka - Habokàn'ny trano.
1Ary niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 2Izao no lalàna momba ny boka, amin'ny andro hidiovany: 3Hoentina ho ao amin'ny mpisorona izy, dia hivoaka ny toby ny mpisorona hizaha azy. Ka raha sitrana ny ferin'ny habokàn'ilay boka, 4dia hodidian'ny mpisorona halaina ho an'ilay hodiovina ny vorona roa velona sady madio, ny hazo sedra, ny lamba mena antitra, ary ny hisopa. 5Ny iray amin'ireo vorona no hasain'ny mpisorona hovonoina eo ambony vilany tany misy rano avy amin'ny rano velona; 6vao halainy ilay vorona sisa velona, ny hazo sedra, ny lamba mena antitra, ary ny hisopa, hatsobony mbamin'ny vorona velona ao amin'ny ràn'ilay vorona novonoina, eo ambonin'ny rano velona, 7ka fafazany amin'izany impito ilay hodiovina amin'ny habokàny, dia holazainy hoe madio izy, ary halefany ho any an-tsaha ilay vorona velona. 8Izay midio hanasa ny fitafiany, hanaratra ny volon-kodiny rehetra ary handro amin'ny rano, dia hadio izy, ka hahazo miditra ao an-toby, nefa mbola hijanona eo ivelan'ny lainy hafitoana.
9Amin'ny andro fahafito hoharatany avokoa ny volon-kodiny rehetra, ny volon-dohany, ny volom-bavany, ny manja-masony, hoharatany ny volon-kodiny rehetra; ary hosasany ny fitafiany, hampandroiny amin'ny rano ny tenany, dia hadio izy. 10Amin'ny andro fahatelo izy hitondra zanak'ondry tsy misy kilema roa, ondrivavy vao iray taona, tsy misy kilema, iray, lafarina tsara indrindra telo ampahafolon'ny efah, voadity tamin'ny diloilo, hatao fanatitra, ary diloilo iray loga. 11Izay mpisorona manao ny fanadiovana hanolotra an'izay olona midio, mbamin'ireo zavatra rehetra ireo eo anatrehan'ny Tompo, anoloan'ny trano lay fihaonana. 12Halain'ny mpisorona ny iray amin'ireo zanak'ondry, ka hatolony ho sorona fanonerana, mbamin'ny diloilo iray loga koa, ka hahevahevany ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan'ny Tompo. 13Eo amin'ny toerana famonoana ny sorona noho ny ota, sy ny sorona dorana, no hamonoany ny zanak'ondry, dia eo amin'ny fitoerana masina; fa amin'ny sorona fanonerana, dia an'ny mpisorona, toy ny amin'ny sorona noho ny ota, ny zavatra atao sorona: zava-masina dia masina izany. 14Hangalan'ny mpisorona ny ràn'ny sorona fanonerana, dia hanentenany an'ilay midio amin'ny tendron'ny ravin-tsofiny havanana, sy ny ankiben-tànany havanana, ary ny ankiben-tongony havanana. 15Dia halain'ny mpisorona ny diloilo iray loga, ka haidiny amin'ny felatànany havia. 16Hatsoboky ny mpisorona amin'ny diloilo izay eo am-pelatànany havia, ny rantsan-tànany ankavanana, hanaovany famafàzana impito eo anatrehan'ny Tompo amin'ny rantsan-tànany. 17Ary ny diloilo sisa eo an-tànany, dia hatentiny an'ilay midio amin'ny tendron'ny ravin-tsofiny havanana, sy ny ankiben-tànany havanana ary ny ankiben-togony havanana, dia eo ambonin'ny ràn'ny sorona fanonerana. 18Izay diloilo sisa mbola eo an-tànany kosa, dia hataony amin'ny lohan'ilay midio, ary hanao ny fanonerana ho azy, eo anatrehan'ny Tompo, ny mpisorona. 19Rahefa izany hatolotry ny mpisorona ny sorona noho ny ota, sy hataony ny fanonerana ho an'ilay midio ho afaka amin'ny lotony. 20Dia hovonoiny ny sorona dorana, hatolony eo ambonin'ny otely miaraka amin'ny fanatitra, ka hanao ny fanonerana ho an'izany olona izany izy, dia hadio ilay olona.
21Raha mahantra izy, ka tsy ampy ny fananany, dia haka zanak'ondry iray monja ihany izy, hatolotra ho sorona fanonerana, fanatitra ahevaheva, hanaovana ny fanonerana ho azy. Haka lafarina tsara indrindra izy, ampahafolon'ny efah ihany voadity amin'ny diloilo, hatao fanatitra, ary diloilo iray loga, 22mbamin'ny domohina roa, na vanto-boromailala roa, araka izay azony atao, ny iray ho sorona noho ny ota, ny iray ho sorona dorana. 23Hoentiny ho eo amin'ny mpisorona ireo ho fidiovany, amin'ny andro fahavalo, dia eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana, eo anatrehan'ny Tompo. 24Dia horaisin'ny mpisorona ny zanak'ondry hatao sorona fanonerana sy ny diloilo iray loga, ka hahevahevany eo anatrehan'ny Tompo. 25Ary rahefa avy namono ny zanak'ondry hatao sorona fanonerana ny mpisorona, dia hangalany ny rà avy amin'ny sorona fanonerana, hatentiny an'ilay midio eo amin'ny tendron'ny ravin-tsofiny havanana sy ny ankiben-tànany havanana, ary ny ankiben-tongony havanana. 26Rahefa izany dia haidin'ny mpisorona eo am-pelatànany havia ny diloilo. 27Ny rantsan-tànany havanana no hanaovan'ny mpisorona ny famafazana impito amin'ny diloilo izay eo an-tànany ankavia, eo anatrehan'ny Tompo. 28Hotentenan'ny mpisorona amin'ny diloilo eo an-tànany havanana, ary ny ankiben-tongony havanana, amin'izay nasiany ny ràn'ny zavatra natao sorona fanonerana. 29Ilay diloilo sisa eo an-tànany, dia hataon'ny mpisorona amin'ny lohan'ilay midio, hanaovana ny fanonerana ho azy, eo anatrehan'ny Tompo. 30Rahefa izany, dia hatolony ny iray amin'ny domohina na ny iray amin'ny vanto-boromailala, izay azony novonoina, 31ny iray ho sorona noho ny ota, ny iray ho sorona dorana, ombam-panatitra. Toy izany no hanaovan'ny mpisorona ny fanonerana ho an'izay midio, eo anatrehan'ny Tompo. 32Izany no lalàna momba ny fidiovan'izay nanana fery habokàna ka tsy ampiampy fananana.
33Ary niteny tamin'i Moizy sy Aarona Iaveh nanao hoe: 34Rahefa tafiditra any amin'ny tany Kanaana izay omeko anareo ho fanananareo, raha hasiako fery habokàna ny trano anankiray amin'ny tany hanananareo, 35dia handeha hilaza izany amin'ny mpisorona, ny tompon'ilay trano, hanao hoe: Hitako misy tahaka ny fery habokàna ao amin'ny tranoko. 36Alohan'ny hidiran'ny mpisorona ao hizaha ilay fery dia hasainy foanana aloha ny trano mba tsy haloto izay zavatra rehetra ao, vao hiditra hizaha ny trano izy.
37Dia hozahan'ny mpisorona ilay fery, ka raha hitany fa misy lavaka maitsomaitso na menamena izay toa tafalentika amin'ny rindrina, ao amin'ny fery, eo amin'ny rindrin-trano, 38dia hivoaka ny trano ny mpisorona hatreo am-baravarana ka hasainy hohidiana ny trano, mandritra ny hafitoana. 39Amin'ny andro fahafito hiverina ao indray ny mpisorona. Raha hitany fa nanitatra eo amin'ny rindrin-trano ny fery: 40ny vato voan'ny fery hasainy hesorina hariana any ivelan'ny tanàna, amin'ny toerana maloto; 41ny ati-trano manontolo hasainy kikisana, hariana any ivelan'ny tanàna amin'ny toerana maloto ny vovoka rehetra voakiky; 42ary ny vato hafa no halaina hasolo ilay teo, ary feta hafa no halaina handalorana ny trano indray.
43Raha mipoitra ao amin'ny trano indray ny fery aty aorian'ny nanesorana ny vato sy nikikisana amana nandalorana ny trano, dia hiverina hizaha azy indray ny mpisorona; 44ka raha nanitatra ao amin'ny trano ny fery dia habokàna ratsy amin'ny trano izany, ka maloto izy. 45Horavana ny trano, ny vato, ny hazo, ny lalotra rehetra amin'ny trano, dia hoentina any ivelan'ny tanàna avokoa, amin'ny toerana maloto, izany rehetra izany. 46Izay niditra tao an-trano mandritra ny fotoana nilazana azy hoe mihidy, dia haloto mandra-paharivan'ny andro. 47Izay nandry tao an-trano hanasa ny fitafiany, izay nihinana tao an-trano hanasa ny fitafiany.
48Nefa raha hitan'ny mpisorona nony efa niverina tao an-trano izy, fa tsy nanitatra ilay fery taorian'ny nandalorana ny trano, dia holazainy fa madio ny trano, satria sitrana ny fery. 49Ka izao no halainy ho fanadiovana ny trano: vorona roa, hazo sedra, lamba mena antitra ary hisopa. 50Dia hovonoiny eo ambony vilany tany, ambony rano velona, ny vorona iray. 51Ary halainy ny hazo sedra sy ny hisopa, mbamin'ny lamba mena antitra, sy ny vorona mbola velona, hatsobony ao anatin'ny ran'ilay vorona novonoina sy ao anatin'ny rano velona ka amafazany ny trano impito. 52Dia handiovany ny trano ny ràn'ilay vorona, ny rano velona, ny vorona velona, ny hazo sedra, ny hisopa, ny lamba mena antitra; 53ary halefany ho any ivelan-tanàna any an-tsaha ilay vorona velona. Toy izany no hanaovany ny fanonerana ho an'ny trano, dia hadio izy.
54Izany no lalàna momba ny fery habokàna, sy ny kimavo, 55ny habokàna amin'ny fitafiana sy ny trano, 56ny mamontsina, ny anakandro, ary ny hodi-potsy. 57Izany no hahalalana na maloto na madio ny zavatra anankiray. Izany no lalàna momba ny habokàna. >